Madaxweyne Xasan oo mar 3-aad tegaya Dh. Mareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii labaad muddo 2 bilood ah lagu wadaa inuu gaaro magaalada Dhuusa Mareeb ee xarrunta gobolka Galgaduud, iyadoo weli muran ka taagan yahay halka lagu qabanayo shirka lagu dhisayo maamulka gobollada Dhexe ee Soomaaliya.
24-kii Maarso ee bishii hore ayaa madaxweyne Xasan Sheekh tegay halkaas, kadib markii Odayaasha ka qeybgalay shirkii dib u heshiisiinta Dhuusa Mareeb ay soo saareen go’aan shirka maamul sameynta loogu qabanayo isla Dhuusamareeb, loogana badelayo Cadaado.
Madaxweyne Xasan wuxuu halkaas ku hoyday labo cehso, wuxuuna kala soo laabtay naatiijo la’aan, isagoo kadibna aaday dalka Masar oo uu uga qeybgalay shir Madaxeedka dalalka Carabta.
Haatan, madaxweynaha ayaa la sheegayaa inuu geli doono dedaalkii ugu dambeeyey ee lagu raadinayo in dadka gobollada dhexe isku raacaan goobta lagu qabanayo shirkaas, iyadoo dowladda Soomaaliya rabto degmada Cadaado.
Madaxweyne Xasan ayaa markii ugu horreysay inta uu madaxweynaha ayahay tegay Dhuusa Mareeb 10-kii bishii Febaraayo ee sanadkaan, isagoo xilligaas ka qeybgalay shirkii dib u heshiisiinta, goobtana kaga dhawaaqay in shirka maamulka lagu dhisayo lagu qabanayo Cadaado.